၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၄ | အွန်လိုင်း သမ္မာကျမ်းစာ | ကမ္ဘာသစ်ဘာသာပြန်ကျမ်း
ဝက်ဘ်ဆိုက် ဘာသာစကားကို ပြောင်းပါ
Log in (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
နားဆင်​စ​ရာ ကျမ်းစာ ဇာတ်လမ်း
အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
အလှူငွေ (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ဘာသာစကား ရွေးချယ်ပါ မြန်မာ Log in (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ဒီဆောင်းပါးကို %% ဘာသာစကားနဲ့ ဖတ်လိုပါသလား
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကန်နာဒါ ကန်ယန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကမ္ဘောဒီးယား ကာဇက် ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ကိုရီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကိုလံဘီယာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကီကာအွန်ဒီ ကီကူယူ ကီကွန်ဂို ကီချူဝါ (အန်ကက်ရှ်) ကီချူဝါ (အိုင်ယာကူချို) ကီရီဘာတီ ကီရွန်ဒီ ကီလူဘာ ကော့စတာရီကာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကျူးဘား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကွန်ဂို ကွီဘက် လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ခရိုအေးရှား ခရိုအေးရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ချက် ချက် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ချီချေဝါ ချီတမ်ဘူကာ ချီတွန်ဂါ ချီလီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂရိ ဂရိ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂါ ဂါနာ လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ဂူဂျရာတီ ဂျပန် ဂျပန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂျမေကန် လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ဂျာမန် ဂျာမန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂျားဗား ဂျော်ဂျီယာ ဂွန် ဂွာတီမာလာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂွာရာနီ စင်ဟာလာ စပိန် စပိန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား စရာနန်တွန်ဂို စလိုဗက် စလိုဗက် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား စလိုဗေးနီးယား စလိုဗေးနီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား စီပီဒိုင် စီဘမ်ဘာ စီဘွာနို ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆန်ဂို ဆာမိုအာ ဆာလ်ဗေဒိုရန် လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား ဆားဗီးယား (စီရီးလစ်) ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆီတွန်ဂါ (မာလာဝီ) ဆီလိုဇီ ဆွစ် ဂျာမန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဆွာတီ ဆွာဟီလီ ဆွာဟီလီ (ကွန်ဂို) ဆွီဒင် ဆွီဒင် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဇင်ဘာဘွေ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဇမ်ဘီယာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဇူးလူး တက်တွန် ဒီလီ တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တဇော့ဇီလ် တမီလ် တယ်လ်ဂူ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တရုတ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား တဟီတီ တာတာ တာ့ခ်မန် တီခူနာ တီဂရင်ယာ တီရှီလူဘာ တူဗာလူ တူရကီ တောင်အာဖရိက လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား တော့ခ် ပီဆင်း တွန်ဂန် တွီ ထိုင်ဝမ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ထိုင်း ထိုင်း လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဒတ်ချ် ဒတ်ချ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဒိန်းမတ် နယူးဇီလန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား နိုင်ဂျီးရီးယန်း လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကား နီကာရာဂွာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား နီပေါ နီအာစ် နော်ဝေ ပနားမား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပန်ဂါဆီနန် ပန်ဂျာဘီ ပါရာဂွေး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပါရှန်း ပိုလန် ပိုလန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပီရူး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပေါ်တူဂီ (ပေါ်တူဂယ်လ်) ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ပေါ်တူဂီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ပြင်သစ် ပြင်သစ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဖင်လန် ဖိလစ်ပိုင် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဖီဂျီ ဗင်နီဇွဲလား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဗန်ဒါ ဗီယက်နမ် ဗြိတိန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘစ်လာမာ ဘရာဇီး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘာတက် (ကာရို) ဘာတက် (တိုဘာ) ဘိုလီးဗီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘူလ်ဂေးရီးယား မက္ကဆီကို လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မက်ဆီဒိုးနီးယား မလေး မလေးရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မာဒါဂက်စကာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မာယာ မာရသီ မာလဂက်စီ မာလာယာလမ် မိုဇမ်ဘစ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မော်လ်တီစ် မြန်မာ ယူကရိန်း ယူရုဂွေး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ယောရာဘာ ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရုရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ရှိုစာ ရှိုနာ လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီးယား လူဂန်ဒါ လူဗာလီ လူအို ဝါရေး‑ဝါရေး သြစတြီးယား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား သြစတြေးလျ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဟင်ဒီ ဟန်ဂေရီ ဟန်ဂေရီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဟီဘရူး ဟီရီ မိုတူ ဟီလီဂေနွန် ဟေတီ ခရီအိုးလ် ဟွန်ဒူးရပ်စ် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အက်စတိုးနီးယား အက်ဖစ်ခ် အင်ဇီမာ အင်ဒိုနီးရှား အင်ဒိုနီးရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အင်းဒီးယန်း လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အင်္ဂလိပ် အစ္စရေး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အစ်ဘို အဇာဘိုင်ဂျန် အဇာဘိုင်ဂျန် (ဆီးရီးလစ်) အမေရိကန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အမ်ဘွန်ဒူ အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာရဗီ အိုင်စိုကို အိုင်ယာလန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အိုတီတီလာ အိုရိုမို အီကွေဒေါ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အီတလီ အီတလီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အီလိုကို အော့စက်တီယန် အေးဝေး ဥဇဘက် ဥဇဘက် (ရိုမန်)
ကမ္ဘာဦး ထွက်မြောက်ရာ ဝတ်ပြုရာ တောလည်ရာ တရားဟောရာ ယောရှု တရားသူကြီး ရုသ ၁ ရှမွေလ ၂ ရှမွေလ ၁ ဘုရင်များ ၂ ဘုရင်များ ၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂ ရာဇဝင်ချုပ် ဧဇရ နေဟမိ ဧသတာ ယောဘ ဆာလံ ပညာအလိမ္မာ ဒေသနာ ရှောလမုန်သီချင်း ဟေရှာယ ယေရမိ မြည်တမ်းစကား ယေဇကျေလ ဒံယေလ ဟောရှေ ယောလ အာမုတ် ဩဗဒိ ယောန မိက္ခာ နာဟုံ ဟဗက္ကုတ် ဇေဖနိ ဟဂ္ဂဲ ဇာခရိ မာလခိ မဿဲ မာကု လုကာ ယောဟန် တမန်တော် ရောမ ၁ ကောရိန္သု ၂ ကောရိန္သု ဂလာတိ ဧဖက် ဖိလိပ္ပိ ကောလောသဲ ၁ သက်သာလောနိတ် ၂ သက်သာလောနိတ် ၁ တိမောသေ ၂ တိမောသေ တိတု ဖိလေမုန် ဟီဘရူး ယာကုပ် ၁ ပေတရု ၂ ပေတရု ၁ ယောဟန် ၂ ယောဟန် ၃ ယောဟန် ယုဒ ဗျာဒိတ် ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈ ၁၉ ၂၀ ၂၁ ၂၂ ၂၃ ၂၄ ၂၅ ၂၆ ၂၇ ၂၈ ၂၉
၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၄:၁-၃၁
ဒါဝိဒ်​က ပု​ရော​ဟိတ်​အုပ်​စု ၂၄ စု​ဖွဲ့​စည်း (၁-၁၉)
ကျန်​တဲ့​လေ​ဝိအနွယ်​ရဲ့ တာဝန်​တွေ (၂၀-၃၁)
၂၄ အာ​ရုန်​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ​ကို အုပ်​စု​တွေ ခွဲ​ထား​တယ်။ အာ​ရုန်​ရဲ့​သား​တွေ​က နာ​ဒပ်၊ အဘိ​ဟု၊+ ဧ​လာ​ဇာ၊ ဧ​သမာ။+ ၂ နာ​ဒပ်​နဲ့ အဘိ​ဟု​က ဖခင် မကွယ်​လွန်​မီ သေဆုံး​ခဲ့​ကြ​တယ်။+ သူတို့​မှာ သား​တစ်​ယောက်​မှ မရှိ​ဘူး။ ဒါ​ပေမဲ့ ဧ​လာ​ဇာ​နဲ့+ ဧ​သမာ​က​တော့ ပု​ရော​ဟိတ်​တွေ​အဖြစ် ဆက်​အမှု​ဆောင်​ကြ​တယ်။ ၃ ဒါဝိဒ်​က အာ​ရုန်​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ​ကို လုပ်ငန်း​တာဝန်​အလိုက် အုပ်​စု​တွေ ခွဲ​ပေး​တယ်။ ဧ​လာ​ဇာ​အမျိုး​ထဲ​က ဇာ​ဒုတ်၊+ ဧ​သမာ​အမျိုး​ထဲ​က အဟိ​မလက်​က ဒါဝိဒ်​ကို ဝိုင်း​ကူ​ပေး​တယ်။ ၄ ဧ​လာ​ဇာ​အမျိုး​က ဧ​သမာ​အမျိုး​ထက် ခေါင်း​ဆောင် ပို​များ​တာ​ကြောင့် ခေါင်း​ဆောင်​တွေ​ကို ခွဲ​လိုက်​တဲ့​အခါ ဧ​လာ​ဇာ​အမျိုး​မှာ ဆွေ​မျိုး​စု​ခေါင်း​ဆောင် ၁၆ ယောက်၊ ဧ​သမာ​အမျိုး​မှာ ဆွေ​မျိုး​စု​ခေါင်း​ဆောင် ၈ ယောက်​ရှိ​တယ်။ ၅ ဒါ့​အပြင် ဧ​လာ​ဇာ​အမျိုး​မှာ​ရော၊ ဧ​သမာ​အမျိုး​မှာ​ရော သန့်​ရှင်း​ရာ​အရပ်​မှာ ကြီး​ကြပ်​တဲ့ ခေါင်း​ဆောင်​တွေ၊ စစ်​မှန်​တဲ့ ဘုရား​သခင်​အတွက် အမှု​ဆောင်​တဲ့ ခေါင်း​ဆောင်​တွေ ရှိ​တယ်။ ဒါ​ကြောင့် အုပ်​စု​တွေ​ကို မဲ​ချ​ပြီး+ တာဝန်​ခွဲ​ဝေ​ပေး​လိုက်​တယ်။ ၆ ဧ​လာ​ဇာ​အမျိုး​ထဲ​က ဆွေ​မျိုး​စု​တစ်​စု၊ ဧ​သမာ​အမျိုး​ထဲ​က ဆွေ​မျိုး​စု​တစ်​စု​ကို အလှည့်​ကျ မဲ​ချ​ပြီး ရွေး​တယ်။ အဲဒီ​နောက် နာ​သနေ​လ​ရဲ့​သား လေ​ဝိအမျိုး​သား​တွေ​ရဲ့ စာ​ရေး​တော် ရှေ​မာ​ယ​က ဘုရင်​နဲ့ မှူး​မတ်​တွေ​ရှေ့​မှာ၊ ပု​ရော​ဟိတ်​ဇာ​ဒုတ်၊+ အဗျာ​သာ​ရဲ့​သား+ အဟိ​မလက်၊+ ပု​ရော​ဟိတ်​တွေ​နဲ့ လေ​ဝိအမျိုး​သား ဆွေ​မျိုး​စု​ခေါင်း​ဆောင်​တွေ​ရှေ့​မှာ သူတို့​ရဲ့​နာ​မည်​ကို ရေး​မှတ်​တယ်။ ၇ ဦး​ဆုံး​မဲ​ကျ​တဲ့​သူ​က ယော​ယ​ရိပ်၊ ဒုတိ​ယ ယေ​ဒါ​ယ၊ ၈ တ​တိ​ယ ဟာရိမ်၊ စ​တုတ္ထ စော​ရိမ်၊ ၉ ပဉ္စမ​ မာလ​ခိ​ယ၊ ဆ​ဋ္ဌ​မ မိ​ယာ​မိန်၊ ၁၀ သတ္တ​မ ဟ​က္ကုတ်၊ အဋ္ဌ​မ အဘိ​ယ၊+ ၁၁ နဝမ​ ယေ​ရွှာ၊ ဒ​သမ ရှေ​က​နိ၊ ၁၂ ဆယ့်​တစ်​ယောက်​မြောက် ဧလျာ​ရှိပ်၊ ဆယ့်​နှစ်​ယောက်​မြောက် ယာကိမ်၊ ၁၃ ဆယ့်​သုံး​ယောက်​မြောက် ဟု​ပါ၊ ဆယ့်​လေး​ယောက်​မြောက် ယေရှေ​ဗပ်၊ ၁၄ ဆယ့်​ငါး​ယောက်​မြောက် ဗိလ​ဂ၊ ဆယ့်​ခြောက်​ယောက်​မြောက် အိ​မေရ၊ ၁၅ ဆယ့်​ခု​နစ်​ယောက်​မြောက် ဟေ​ဇိ​ရ၊ ဆယ့်​ရှစ်​ယောက်​မြောက် အပ်​ဇစ်၊ ၁၆ ဆယ့်​ကိုး​ယောက်​မြောက် ပေသဟိ၊ အယောက်​နှစ်​ဆယ်​မြောက် ယေ​ဇ​ကဲ၊ ၁၇ နှစ်​ဆယ့်​တစ်​ယောက်​မြောက် ယာ​ခိန်၊ နှစ်​ဆယ့်​နှစ်​ယောက်​မြောက် ဂါ​မု​လ၊ ၁၈ နှစ်​ဆယ့်​သုံး​ယောက်​မြောက် ဒေလာ​ယ၊ နှစ်​ဆယ့်​လေး​ယောက်​မြောက် မာ​ဇိ​တို့​ဖြစ်​တယ်။ ၁၉ ဘိုး​ဘေး​အာ​ရုန် ချ​မှတ်​ခဲ့​တဲ့ လုပ်​ထုံး​လုပ်​နည်း​အတိုင်း၊ အာ​ရုန်​ကို အစ္စရေး​တို့​ရဲ့​ဘုရား ယေဟောဝါ မိန့်မှာ​ခဲ့​တဲ့​အတိုင်း ယေဟောဝါ​ရဲ့ အိမ်​တော်​ကို လာ​ပြီး အမှု​ဆောင်​ဖို့ အဲဒီ​လို စီ​စဉ်​ထား​တယ်။+ ၂၀ ကျန်​တဲ့​လေ​ဝိအမျိုး​သား​တွေ​က​တော့– အာ​မရံ​ရဲ့+ သား​မြေး​တွေ​ထဲ​မှာ ရှု​ဗွေ​လ၊+ ရှု​ဗွေ​လ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ​ထဲ​မှာ ယေ​ဒေ​ယ၊ ၂၁ ရေ​ဟ​ဘိ​ရဲ့+ သား​မြေး​တွေ​ထဲ​မှာ ခေါင်း​ဆောင် အိ​ရှ​ယာ၊ ၂၂ အိ​ဇ​ဟာ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ​ထဲ​မှာ ရှေ​လော​မုတ်၊+ ရှေ​လော​မုတ်​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ​ထဲ​မှာ ယာ​ဟတ်၊ ၂၃ ဟေ​ဗြုန်​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ​ထဲ​မှာ ခေါင်း​ဆောင်​က ယေ​ရိ၊+ ဒုတိ​ယ အာ​မရိ၊ တ​တိ​ယ ယ​ဟာ​ဇေ​လ၊ စ​တုတ္ထ ယေ​က​မံ၊ ၂၄ သြဇေ​လ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ​ထဲ​မှာ မိက္ခာ၊ မိက္ခာ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ​ထဲ​မှာ ရှ​မိ​ရ။ ၂၅ မိက္ခာ​နဲ့ ညီ​အစ်​ကို​တော်​တဲ့ အိ​ရှ​ယ။ အိ​ရှ​ယ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ​ထဲ​မှာ ဇာခရိ​ဖြစ်​တယ်။ ၂၆ မေရာ​ရိ​ရဲ့+ သား​တွေ​က မဟာ​လိ​နဲ့ မု​ရှိ။ ယာ​ဇိ​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ​ထဲ​မှာ ဗေ​နော​ဖြစ်​တယ်။ ၂၇ မေရာ​ရိ​ရဲ့ သား​မြေး​တွေ​က​တော့– ယာ​ဇိ​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ​ထဲ​မှာ ဗေ​နော၊ ရှော​ဟံ၊ ဇက္ကု​ရ၊ အိ​ဗ​ရိ​တို့​ဖြစ်​တယ်။ ၂၈ မဟာ​လိ​ရဲ့သား ဧ​လာ​ဇာ​မှာ​တော့ သား​တစ်​ယောက်​မှ မရှိ​ဘူး။+ ၂၉ ကိ​ရှ​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ​ထဲ​မှာ ယေ​ရ​မေလ။ ၃၀ မုရှိ​ရဲ့​သား​တွေ​က မဟာ​လိ၊ ဧ​ဒါ၊ ယေ​ရိ​မုတ်​တို့​ဖြစ်​တယ်။ သူတို့​ဟာ ဖခင်​မျိုး​ရိုး​အလိုက် လေ​ဝိအမျိုး​သား​တွေ ဖြစ်​တယ်။ ၃၁ သူ​တို့​လည်း ညီ​အစ်​ကို​တွေ​ဖြစ်​တဲ့ အာ​ရုန်​ရဲ့​သား​မြေး​တွေ လုပ်​သလို​ပဲ ဒါဝိဒ်​မင်း၊ ဇာ​ဒုတ်၊ အဟိ​မလက်၊ ပု​ရော​ဟိတ်​တွေ​နဲ့ လေ​ဝိအမျိုး​သား​တွေ​ရဲ့ ဆွေ​မျိုး​စု​ခေါင်း​ဆောင်​တွေ​ရှေ့​မှာ မဲ​ချ​ကြ​တယ်။+ ကြီး​တာ​ငယ်​တာ​ကို ထည့်​မတွက်​ဘဲ မဲ​ချ​ကြ​တယ်။
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ ကျမ်းစောင်များ
၁ ရာဇဝင်ချုပ် ၂၄
nwt စာ. ၄၀
မာတိကာကို ပြပါ ## မိုဘိုင်း ကိရိယာမှာ မာတိကာကို ပြပါ၊ ဖျောက်ထားပါဆိုတဲ့ ခလုတ်အတွက်၊ စခရင်ရီဒါအတွက် စာတန်း
မေးခွန်း ၁ ဘုရားသခင် ဘယ်သူလဲ
မေးခွန်း ၂ ဘုရားသခင်အကြောင်း ဘယ်လို သင်ယူနိုင်သလဲ
မေးခွန်း ၃ ကျမ်းစာကို ဘယ်သူ ရေးတာလဲ
မေးခွန်း ၄ ကျမ်းစာဟာ သိပ္ပံပညာနဲ့ ကိုက်ညီသလား
မေးခွန်း ၅ ကျမ်းစာရဲ့ အဓိက သတင်းစကားက ဘာလဲ
မေးခွန်း ၆ ကျမ်းစာမှာ မေရှိယအကြောင်း ဘာတွေကြိုပြောထားသလဲ
မေးခွန်း ၇ ဒီနေ့ခေတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမ်းစာမှာ ဘာတွေကြိုပြောထားသလဲ
မေးခွန်း ၈ လူသားတွေ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာ ဘုရားသခင်ကြောင့်လား
မေးခွန်း ၉ လူသားတွေ ဘာကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံစားရတာလဲ
မေးခွန်း ၁၀ ကျမ်းစာမှာ အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘယ်ကတိတွေ ပါသလဲ
မေးခွန်း ၁၁ လူသေရင် ဘာဖြစ်သွားသလဲ
မေးခွန်း ၁၂ သေလွန်သူတွေအတွက် ဘာမျှော်လင့်ချက် ရှိသလဲ
မေးခွန်း ၁၃ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာမှာ ဘာပြောသလဲ
မေးခွန်း ၁၄ ငွေရေးကြေးရေး ပြဿနာကို ဘယ်လို ရှောင်ရှားနိုင်သလဲ
မေးခွန်း ၁၅ ပျော်ရွှင်မှု ဘယ်လို ရနိုင်သလဲ
မေးခွန်း ၁၆ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲ
မေးခွန်း ၁၇ ကျမ်းစာက မိသားစုကို ဘယ်လို ကူညီပေးနိုင်သလဲ
မေးခွန်း ၁၈ ဘုရားသခင်နဲ့ ဘယ်လို ရင်းနှီးနိုင်မလဲ
မေးခွန်း ၁၉ ကျမ်းစောင်တွေမှာ ဘာအကြောင်းအရာတွေ ပါသလဲ
မေးခွန်း ၂၀ ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းကနေ ဘယ်လို အကျိုးအပြည့်အဝ ရနိုင်သလဲ
က၁ ကျမ်းစာဘာသာပြန် လမ်းညွှန်ချက်များ
က၄ ဟီဘရူးကျမ်းစောင်တွေမှာပါတဲ့ ဘုရားသခင့်နာမည်
က၅ ခရစ်ယာန်ဂရိကျမ်းစောင်မှာပါတဲ့ ဘုရားသခင့်နာမည်
က၆-က ဇယား- ယုဒနိုင်ငံနဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ ပရောဖက်များ၊ ဘုရင်များ (အပိုင်း ၁)
က၆-ခ က၆-ခ ဇယား- ယုဒနိုင်ငံနဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ ပရောဖက်များ၊ ဘုရင်များ (အပိုင်း ၂)
က၇-က က၇-က ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ–ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်း မစတင်မီ
က၇-ခ ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းအစ
က၇-ဂ ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂါလိလဲနယ်မှာ ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကြီး (အပိုင်း ၁)
က၇-ဃ က၇-ဃ ယေရှုရဲ့​မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂါလိလဲနယ်မှာ ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကြီး (အပိုင်း ၂)
က၇-င ယေရှုရဲ့​မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂါလိလဲနယ်မှာ ယေရှုရဲ့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကြီး (အပိုင်း ၃) နဲ့ ယုဒပြည်
က၇- စ ယေရှုရဲ့​မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂျော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက် ယေရှုရဲ့ နောက်ပိုင်း အမှုဆောင်လုပ်ငန်း
က၇-ဆ ယေရှုရဲ့​မြေကြီးအသက်တာ အဓိကဖြစ်ရပ်များ—ဂျေရုဆလင်မြို့မှာ ယေရှုနောက်ဆုံး အမှုဆောင်ခြင်း (အပိုင်း ၁)
က၇-ဇ ဂျေရုဆလင်မြို့မှာ ယေရှုနောက်ဆုံး အမှုဆောင်ခြင်း (အပိုင်း ၂)
ခ၂ ကမ္ဘာဦးကျမ်းပါ ဒေသများ၊ ဘိုးဘေးတို့ရဲ့ ခရီးစဉ်များ
ခ၃ အီဂျစ်ပြည်က ထွက်လာခြင်း
ခ၄ ကတိထားရာပြည်ကို အောင်နိုင်ခြင်း
ခ၅ တဲတော်နဲ့ ပုရောဟိတ်မင်း
ခ၆ ကတိထားရာပြည်နဲ့ ခိုလှုံရာမြို့များ
ခ၇ ဒါဝိဒ်နဲ့ ရှောလမုန်ရဲ့နိုင်ငံ
၈ခ ရှောလမုန်ဆောက်တဲ့ ဗိမာန်တော်
ခ၉ ဒံယေလကြိုဟောတဲ့ ကမ္ဘာ့အာဏာစက်များ
ခ၁၀ ယေရှုလက်ထက် အစ္စရေးနိုင်ငံ
ခ၁၁ ပထမရာစု ဗိမာန်တော်
ခ၁၂-က ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ နောက်ဆုံးသီတင်းပတ် (အပိုင်း ၁)
ခ၁၂-ခ ယေရှုရဲ့ မြေကြီးအသက်တာ နောက်ဆုံးသီတင်းပတ် (အပိုင်း ၂)
ခ၁၃ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ပျံ့နှံ့သွား
ခ၁၄-က အတိုင်းအတာ၊ အခြင်အတွယ်
ခ၁၄-ခ ငွေကြေးနဲ့ အချိန်အတွယ်
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ သမ္မာကျမ်းစာ ကမ္ဘာသစ်ဘာသာပြန်ကျမ်း
အသံဖိုင် အသံဖိုင် ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ သမ္မာကျမ်းစာ ကမ္ဘာသစ်ဘာသာပြန်ကျမ်း
ဝေမျှပါ ဝေမျှပါ သမ္မာကျမ်းစာ ကမ္ဘာသစ်ဘာသာပြန်ကျမ်း
JW.ORG® / ယေဟောဝါသက်သေများရဲ့ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်
အစည်းအဝေး ရှာပါ (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
အစည်းအဝေးကြီး ရှာပါ (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ဆရာဝန်တွေ​အတွက် ဆေး​ဘက်​ဆိုင်ရာ အချက်အလက်​များ
ကင်းမျှော်စင် အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်™ (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Copyright © 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. လိုက်နာရန် စည်းကမ်းများ | ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ
လက်သင်္ကေတစကားဖြင့်သာ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာကြည့်နိုင် ကူးယူ၍သာရသော စာပေ